प्रियंका चोपडा बनिन् आमा! :: एजेन्सी :: Setopati
प्रियंका चोपडा बनिन् आमा!
नयाँ दिल्ली, माघ ८
नायिका प्रियंका चोपडा आमा बनेकी छिन्। सरोगेसीबाट आफू आमा बनेकी उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी छन्।
‘हामी सरोगेसीमार्फत जन्मिएको बच्चालाई स्वागत गर्दैछौं भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। हामी यस विशेष अवसरमा हामी सबैलाई हाम्रो गोपनियता सुरक्षित गर्न आदरपूर्वक अनुरोध गर्दछौं, किनकि हामी अहिले हाम्रो परिवारमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित छौं। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद,' उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।
यसअघि नै प्रियंकाले आफू आमा बन्न चाहेको बताएकी थिइन्। जोनसका तीन दाजुभाइ निक, केभिन र जोको हालै नेटफ्ल्क्सिमा रिलिज भएको नयाँ कार्यक्रम ‘जोनस ब्रोथर्स फ्यामेली रोस्ट’मा उपस्थित भएर प्रियंकाले आफु आमा बन्न लागेको घोषणा गरेकी हुन्।
उनले यस्तो कुरा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै निक सुरुमा अलमल देखिएका थिए। केहीबेर दर्शक पनि चुपचाप भए, तर यो मौनता लामो समयसम्म भने टिकेन।
बलिउड लाइफका अनुसार प्रियंकाको आमा बन्ने घोषणा केबल एउटा मजाक थियो। उनले कार्यक्रमकै लागि भनेर यस्तो ठट्टा गरेकी थिइन्।
‘म मजाक गरिरहेकी हुँ,’ प्रियंकाले हाँस्दै भनेकी थिइन्, ‘तर निकको अनुहार हेर्न लाएकको थियो।’ प्रियंकाले आफु मजाक गरेको भनेपछि दर्शकमाझ हाँसो चलेको बलिउड लाइफले जनाएको छ। तर आज आफैंले सामाजिक सञ्जालमा आफू आमा मन्न लागेको जानकारी गराएकी हुन्।
उनले सन् २०१८ डिसेम्बरमा निक जोनससँग विवाह गरेकी थिइन्।
निकोलस जेरी जोनास एक अमेरिकी गायक, अभिनेता र रेकर्ड निर्माता हुन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८, २३:२८:००